के हो नाकबाट पानी बगिरहने समस्या अर्थात् राइनोरिह्या? - Internet Khabar
January 7, 2018 July 22, 2018 Internet Khabar
डा माधवप्रसाद दाहाल
नाकबाट पातलो पानी बग्नुलाई राइनोरिह्या भनिन्छ। धेरैजसो मौसम परिवर्तन हुदाँ जाडो सुरु या जाडोबाट गर्मी सुरु हुने समयमा यस्तो समस्या देखापर्छ।
अरु कारणले पनि नाकबाट पानी बग्ने समस्या हुन्छ। नाकमा संक्रमण भएमा, नाकमा चोट लागेमा, मासु पलाएमा पनि यस्तो समस्या हुन्छ। संक्रमण पनि भाइरस र जीवाणु २ किसिमको हुन्छ।
नाकबाट पानी बग्नु नाकको सामान्य समस्याले मात्र नभई मस्तिष्कको कारणले पनि हुन सक्छ। तर, यस्तो समस्या १ सयमा १ जनालाई हुन्छ।
टाउकोमा चोट लागेको छ भने पनि नाकबाट पानी बग्ने समस्या देखिन्छ। नाकको सम्बन्ध मस्तिष्कको अघिल्लो भागसँग हुन्छ। मस्तिष्क (गिदी) को अघिल्लो भागलाई ‘फ्रन्ट लो’ भनिन्छ, त्यहाँ चोट लाग्यो, संक्रमण भयो, ट्युमर पलायो भने पनि नाकबाट पानी बगिरहन्छ। त्यो गिदीको पानीलाई सिएसएफ (सेरेब्रल स्पाइनल फ्लुइड) भनिन्छ। गिदीको पानी नाकबाट बग्नुलाई सिएसएफ राइनोरिह्या भनिन्छ। धेरैजसो हेड इन्जुरी भएको अवस्थामा यस्तो समस्या देखिन्छ।
यदि, समयमै उपचार हुन सकेन भने त्यो समस्या पिनासमा परिणत हुन्छ। मलाई एउटा बिरामी याद छ। एउटा बालकको १४ वर्षसम्म हरेक ६ महिनामा म्यानेन्जाइटिसको समस्याले भर्ना भई उपचार भइरहेको थियो। तर, पूर्ण निको भएको थिएन। के कारणले म्यानेन्जाइटिस भयो भन्ने ‘सोर्स’ पत्ता लागेको थिएन। म्यानेन्जाइटिसको उपचार भयो, तर सोर्सको उपचार भएको थिएन। पछि एकजना फिजिसियनले ती बालकलाई मकहाँ पठाए। उनलाई जाँच गर्दा थाहा भयो उनको पिनासको थैलीमा दुवैपट्टी पिप जमेको रहेछ। त्यो पिप सफा गरेपछि उनलाई पूर्ण निको भएको थियो। कहिलेकाहीँ समयमा सही उपचार नहुदाँ यस्तो समस्या लामो समयसम्म चलिरहन्छ।
एक हप्तामा कम भएन। पानी पहेंलो र बाक्लो आउन थाल्यो, ज्वरो देखियो भने एन्टिबायोटिक औषधि पनि चलाउनुपर्ने हुक्छ। यो समस्या सबैलाई हुन्छ। तर बच्चा र वृद्धलाई बढी सताउँछ।
सामान्यतः नाकबाट पानी बग्ने समस्या एक हप्तामा कम हुँदै जानुपर्छ। तर, एक हप्ताभन्दा बढी समयमा पनि पानी बग्न कम भएन, बासना शक्ति कम हुँदै गयो, हाच्छिउँ आइरहने, नाक बन्द हुने, नाकको भित्रपट्टि चिलाउने, टाउको दुखिरहने, उच्च ज्वरो आइरहने जस्ता लक्षण देखियो भने चिकित्सककहाँ देखाएर औषधि खानुपर्छ।
चिसोमा बच्चा र वृद्धवृद्धालाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ। चिसोमा बढी बाहिर नजाने, न्यायो लुगा लगाउने, गर्मी हुने खालको फलफूल खाने गर्नुपर्छ।
धेरै पानी बगिरह्यो, पानी बाक्लो हुँदै गयो या पानीमा रगत पनि देखिन थाल्यो भने एक्सरे गरेर पनि उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
हामीकहाँ आउने बिरामी धेरै चाहिँ पिनास भइसकेपछि आउँछन्। पिनास पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यसैले लामो समयदेखि नाकबाट पानी बगिरहेको छ भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराउनु आवश्यक छ।
(डा दाहाल काठमाडौं नाक, कान, घाँटी अस्पतालमा कार्यरत छन्)
मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित गरेर देउवा किन पुगे शीलत निवास?
स्वस्थ रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनका १२ टिप्स
किन हुन्छ स्तनको आकार फरक–फरक ?
गाजर खानुका १० फाइदा !